China Ji achọ Deer Metal kandụl njide emepụta na suppliers | Shengrui
Ji achọ Deer Metal kandụl njide
Elu ogo ígwè ọkpụrụkpụ na 1.0mm.
Ihe: Elu akwa ígwè ọkpụrụkpụ na 1.0mm.
Sample oge: 5-7 ụbọchị.
Nha: 6” L, 8”L.10”L.12”L, 18”L ma ọ bụ ahaziri.
Imecha: Ntụ ntụ ntekwasa inogide matte ojii.
Nha: 30 x 30 x 12cm.
Ngwugwu: 1pc / plastic bag / box.5pcs / katọn.
Zuru okè Metal art imewe ka jide kandụl ma ọ bụ dị ka a home mma.
Ngwa Ngwa: Ndị na-ejide oriọna ga-eji ndị na-ejide ọkụ a n'ụlọ. Ha nwere ike ịbụ ihe ndozi okpokoro kọfị, ihe ndozi TV maka ime ụlọ, geometric centerpieces maka agbamakwụkwọ, ma ọ bụ mpempe etiti maka tebụl ime ụlọ. Nakwa ezigbo onyinye maka agbamakwụkwọ, oriri, ụlọ na ụbọchị ọmụmụ.
Ezigbo Onyinye maka Ọbịa, Ndị Enyi na Ezinụlọ：Ndị na-ejide ọkụ kandụl bụ ezigbo onyinye maka Ndị Enyi, ,lọ, Spa, Hotellọ oriri na ọ Hotelụ andụ na mmemme pụrụ iche. Onyinye zuru oke maka ubochi Nna, Ubochi ndi nne, Ekele, ekeresimesi, ubochi omumu ya, agbam akwukwo na ndi ozo. Ngwongwo oriọna oriọna a na-enweta ugbu a ga-adị n'ụdị ma mepụta ahụmịhe kwesịrị ncheta maka ezinụlọ gị, friends na ndi obia gi. Tinye mma na ịdị mma maka ụlọ gị. Tinye mmetụta ịhụnanya na mpaghara ime ụlọ.
OEM & ODM: Anyị na-eme ngwaahịa ngwaahịa ngwaahịa niile. Anyị nwere ọkachamara imewe otu ndị nwere ike ịmepụta aghụghọ dị ka ndị ahịa’ echiche. Naanị ka anyị mara ma ọ bụrụ na ị nwere echiche ọ bụla n'uche gị. Anyị’Aga m eme ka echiche gị mezuo.
Nke gara aga: Ji achọ mgbidi nko maka igodo
Osote: Ji achọ metal nweta akwa nhicha njide